Androany, i Kolombia dia azo lazaina ho firenena mahaliana sy somary mampidi-doza. Noho izany, tokony ho eo amin'ny ambaratonga mifanaraka amin'izany ny fanomanana ny dia. Ankoatra ireo zavatra ilaina, antontan-taratasy sy fitaovana fifandraisana, ho an'ny fitsidihana any Colombia, dia ilaina koa ny vaksiny. Ny fikarakarana ny fahasalamanao dia asa manokana ho an'ny mpizahatany rehetra. Hanana sidina lavitr'ezaka manerana ny ranomasimbe ka hatrany tropikaly sy ala tsy dia mahazatra, izay mety ho vokany mampalahelo ny tsy fitandremana tsotra.
Rehefa mankany Kolombia ianao, dia mila mihaino ny toro-marika MIKASIKA ary mametraka ny fandaharam-potoana vakinao, ary mitsidika mialoha ny dokotera. Ny fitsidihana tsy maintsy atao any Kolombia dia:
Vaksina amin'ny tazo mavo. Ampidirina indray mandeha isaky ny 10 taona, fara fahakeliny, 10 andro mialohan'ny fialany. Ho an'ny zaza latsaky ny herintaona sy ny vehivavy bevohoka dia voarara io vaksiny io. Ny fanaraha-maso ny sisin-tany manodidina an'i Kolombia miaraka amin'ireo antontan-taratasy hafa avy amin'ireo mpizahatany dia mangataka fanamarinana iraisam-pirenena momba ny fitsaboana amin'ny tazo mavo. Tsara koa ny manamarika fa ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena El Dorado ao Bogota, ireo vakisiny ireo dia omena maimaim-poana ho an'ireo izay maniry. Na izany aza, mandritra ny dia iray amin'ny ala mikitroka dia tsy mihena ny loza ateraky ny aretina. Raha, aorian'i Kolombia, nikasa hitsidika an'i Costa Rica ianao , dia mendrika ny hikarakara ilay vaksiny mialoha: any, ny fangatahana dia anontaniana amin'ny olona rehetra miditra.
Ny vaksinin'ny hepatita A sy B. Indrisy anefa fa any amin'ny firenena maro any Amerika Atsimo dia miseho matetika ny fipoahan'ny aretina noho ny tsy fahampian-drano sy ny fahadiovana.
Fanolorana avy amin'ny tazo mahery. Izy ireo dia tsy maintsy mandoa ireo mpizahantany izay mikasa ny hisakafo sy hisotro rano ivelan'ny trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoanana.
Rehefa manapa-kevitra amin'ny vaksinim-pahalalahana, dia tadidio fa ny karazam-pitsaboana rehetra sy ny sampan-draharahan'ny fiantohana marary any Kolombia dia aloa. Ny masoivohon'ny fiaramanidina dia manoro hevitra mba handaminana ny fiantohana ara-pahasalamana amin'ny fomba toy izany ka tafiditra ao amin'ny asa fanodinana ny serivisy raha misy aretina na ratra goavana.
Na ahoana na ahoana, afaka manome antoka fiadanan-tsaina fanampiny ianao, raha toa ianao mametraka vaksinim-panafody nomena fitsangatsanganana tany Colombia. Ny tena manan-danja amin'izy ireo dia:
Ny vaksiny. Izy io dia atolotra ho an'ireo izay tsy mipetraka ao an-tanàn-dehibe, ary te-handany ny fialantsasatra eny ambanivohitra, izay misy biby be dia be. Indrindra indrindra, ilaina ny mihaino ny tolo-kevitra ho an'ireo izay mieritreritra hitsidika zohy sy toerana hafa fanangonana ramanavy.
Vaksinin'ny diphtheria sy tetanus. Natao indray mandeha 10 taona izy ireo ary hiantohana fiarovana mafy amin'ireo aretina ireo. Tokony hojerena manokana ireo mpankafy ny fizahan-tany momba ny tontolo iainana sy ireo izay mikasa ny hitsidika ireo valam-pirenena ao Kolombia .
Ny vaksiny amin'ny kitrotro, ny mumps ary ny ribela. Izy ireo dia atolotry ny WHO ho an'ny mpizaha tany rehetra, hatramin'ny 1956 hatramin'ny nahaterahany.
Tovana amin'ny tazomoka. Raha mandeha fialan-tsasatra any amin'ny faritra manodidina ny 800 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina ianao, dia misy ny aretina amin'ny tazomoka. Ilaina ny misotro ny fitsaboana mahazatra alohan'ny handehanana ary alao ny tahirin-tsakafo ilaina aminao raha ny marina. Ireo no faritra misy an'i Amazonia, faritanin'i Vichada, Guavyare, Guainia, Cordoba ary Choco.
Ary ny fanolorana farany: alohan'ny handehanana any Kolombia, jereo raha efa misy tampoka ny aretina amin'izao fotoana izao, indrindra any amin'ny faritra izay alehanao.
Gripa nandritra ny fitondrana vohoka nandritra ny telo volana
Ahoana ny handrafetana picnic?
Inona no hanina avy amin'ny fimamoana - fifangaroan'ny fomba mahaliana sy tsotra indrindra
Royal Kanin ho an'ny saka miafina
Cooling - recipe
Ny fahaiza-manao sarobidy 10 izay azon'ny olona tsirairay atao
Ahoana no hitehirizana ovy?
Ahoana no hanamboarana ala honko ao anaty lafaoro?
Inona no hosasana amin'ny menaka solika amin'ny akanjo - ny fomba tsara indrindra ho an'ny karazana lamba
Inona no andraikitry ny hormonina manakorontana?
Manaova fofona ho an'ny kakaô sy ny mofomamy
Mamindra fo amin'ny holatra
Ureaplasmosis: soritr'aretina - ahoana no hahafantarana ilay aretina?
Capsicam avy amin'ny cellulite
Cloak miaraka amin'ny kapa
Maniry tongolobe amin'ny volony ao anaty trano fivoahana amin'ny ririnina
Megan Fox sy Brian Austin Green dia tonga ray aman-dreny fanintelony
Córdoba - toetrandro